Ndị a bụ ụfọdụ ọrụ nke S Pen nke Galaxy Note 9 | Androidsis
Ndị a bụ ụfọdụ ọrụ nke S Pen nke 9 Galaxy Note
Ụbọchị ole na ole gara aga, anyị kwughachiri nkọwapụta nke Galaxy Tab S4, site na ngwa ngwa nke ngwaọrụ a, nke ụmụ okorobịa nọ na SamMobile nwere ike ịnweta. Mana, dị ka ọ dị na mbụ, ngwa ngwa nke ngwaọrụ, ọ bụghị naanị nwere ozi gbasara ngwaọrụ ahụ akọwapụtara, ma na-egosikwa anyị ozi gbasara ngwaọrụ ndị ọzọ nke otu ika nke enwere ike ijikọ ya.
Njikọ Bluetooth nke S Pen nke Galaxy Note 9 bụ ihe taa anyị nwere ike n'ikpeazụ gosi na eze, njikọ nke ga-ekwe ka anyị gbasaa ọnụ ọgụgụ nke ọrụ na ruo ugbu a stylus nke Samsung's Note nso nyere anyị. S Pen na-enye anyị otu bọtịnụ nke anyị nwere ike iji ngwaọrụ na-emekọrịta ihe na ihuenyo, nke nwekwara ike igbochi ọnụọgụ ọrụ nke ngwaọrụ ahụ, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala nke ahụ nwere ike iyi, ebe ọ bụ na ọ bụghị.
Dị ka ụmụ okorobịa si XDA Developers, ndị nwekwara ohere na firmware nke Galaxy Tab S4, nwere ike chọpụta, mgbe nyochachara ngwa Air Command, anyị ga-enwe ike. chịkwaa egwu egwu, ma ọ bụghị nanị na-egwu ma ọ bụ kwụsịtụ ya, kamakwa, anyị ga-enwe ike ima elu n'etiti songs, eleghị anya na-eji okpukpu abụọ.
Ọrụ ọzọ nke ọ ga-enye anyị, ga-abụ bọtịnụ ime ime mgbe ị na-ese foto ma ọ bụ vidiyo, na mgbakwunye na inye gị ohere ijikwa playback nke vidiyo. Ọ ga-enyekwara anyị ohere imeghe ekwentị, ma ọ bụrụ na sekọnd ole na ole gafere n'ejighị ya, naanị site na ịpị bọtịnụ. Mgbe ịpịrị ya, ọ ga-arụ ọrụ nyocha ihu / iris scanner iji hụ na anyị bụ onye nwe ngwaọrụ ahụ.
Ndị a bụ ụfọdụ ọrụ S Pen nke Note 9 ga-enye anyị, ụfọdụ ọrụ nwere ike ịbụ karịa site na ngwa ndị ọzọ na Samsung mee ka ọ dịrị anyị na ala site na oyi akwa nhazi nke Samsung Experience.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Ndị a bụ ụfọdụ ọrụ nke S Pen nke 9 Galaxy Note
Sony IMX 586: Ihe ngosi Sony MP 48 ọhụrụ